सुनको मूल्यमा फेरि नयाँ कीर्तिमान, किन बढ्यो सुन ? – Lokpati.com
केपी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी चितवन अपराध सरकार राशिफल नेपाल प्रहरी नेकपा नेपाली काँग्रेस पक्राउ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड अमेरिका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मृत्यु
By लाेकपाटी न्यूज On ९ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १३:४१
काठमाडौं, ९ फागुन। शुक्रबार पनि नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा बृद्धि भएको छ। सुनको मूलयमा दिनहुँ नयाँ कीर्तिमान बन्नेक्रम शुक्रबार पनि जारी रह्यो।
शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य तोलाको ७८ हजार १०० रुपैयाँ कायम भएको छ। यो हालसम्मकै उच्च मूल्य हो। आज सुनको मूल्य तोलामा ५०० ले बढेर तोलाको ७८ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। बिहीबार सुन तोलाको ७७ हजार ६०० रुपैयाँ थियो।
यही फागुन ६ गते यता नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा दिनहुँ नयाँ कीर्तिमान बनिरहेको हो। शुक्रबार स्थानीय बजारमा तेजाबी सुन पनि तोलामा ५०० रुपैयाँले बढेर तोलाको ७७ हजार ८०० कायम भएको छ ।
यसदिन चाँदीको मूल्य भने तोलाको ९१५ रुपैयाँमै स्थीर रहेको जनाइएको छ।
सुनको मूल्य निरन्तर बढ्नुमा ‘कोरोना भाइरस’ नै मुख्य कारण रहेको बताइन्छ। चीनबाट फैलिएको कोरोना अर्थात ‘कोभिड–१९’ को असर अन्तर्राष्ट्रिय सुनबजारमा समेत परेको विज्ञको भनाइ छ । कोरोना भाइरसका कारण चीनमा दुई हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। आर्थिक क्षेत्र सुस्ताएको छ।
चिनियाँ क्षेत्रमा आर्थिक कारोबार घटेसँगै सुनमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ। सोही कारण सुनको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको विज्ञको ठहर छ। ‘सुनको मूल्य दैनिकरुपमा बढ्नुमा कोरोना नै मुख्य कारण हो’ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने।
उनकाअनुसार कोरोना भाइरसकै कारण लगानीकर्ता सम्पत्ति सुरक्षित गर्न सुनमा बढी आकर्षित भएका हुन्। जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढायो। त्यसको स्वाभाविक असर नेपाली बजारमा पनि परेको हो।शाक्यकाअनुसार फागुन महिना लागेपछि नेपाली बजारमा सुनको कारोबार घटेको छ। माघभन्दा अहिले कारोबार घटेको उनले जानकारी दिए।
डिजेल-पेट्रोलको मूल्य १० रुपैंयाँले घट्यो
उद्योग वाणिज्य संघ नवलपरासीद्वारा घुम्ती पसल सुरु
डलरको भाउ बढ्यो, कति छ आजको विनिमयदर ?
यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका १२ निर्णय